हस्ताक्षर फिर्ता लिएर ओलीसँग जानुभन्दा कमण्डलु बोकेर हिँड्नु बेस’ - Pura Samachar
हस्ताक्षर फिर्ता लिएर ओलीसँग जानुभन्दा कमण्डलु बोकेर हिँड्नु बेस’
नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका युवा नेता हुन् राजेन्द्रकुमार राई । विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय समिति सदस्य भएका राई हाल प्रदेश १ को प्रदेश सभा सदस्य छन् । नेकपा एमालेभित्रको विवाद मिलाउन ओली र माधव नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेता आन्तरिकरुपमा वार्ता गरिरहेका बेला राईले त्यसलाई निर्लज्ज भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।
‘यथाअवस्थाको वार्ता अनाधिकृत वा व्यक्तिगत मात्र हो र यो वार्ता निर्लज्ज प्रकृतिको हो’, राईको भनाइ छ । वार्ता र सम्वाद किन निर्लज्ज ? रातोपाटीले नेता राईलाई प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानी :
तपाईले एमाले विवादमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालको आदेशबिना ओली पक्षसँग गरेको वार्ताको वैधता नहुने र त्यसरी वार्ता गर्नेहरु ओली भन्दा खतरनाक हुन् भन्नुभएको छ । के दोस्रो तहका नेताहरुको वार्ताबाट पारा लाग्दैन भन्ने निश्कर्ष हो ?
वार्ता गर्ने भनेर शीर्षनेतामा सहमति भैसकेपछि कार्यदल बन्यो । कार्यदल बनिसकेपछि वातावरण बनाउँदै जाने, मिठो मसिनो बोल्नेदेखि हिजोका कारवाहीहरु फुकुवा गर्दै जानुपर्नेमा माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहतिका अरु नेताहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निश्कासन गर्ने, प्रदेशका सांसदहरुलाई पनि कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कार्यदलमै रहेका भीम रावललाई कारवाही गर्ने र अरु दुईलाई पनि कारवाहीको नियत राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने कामले वार्ताको वातावरण पुरै भाँडियो ।
पहिलाकै अवस्था अर्थात जुन बेला वार्ता सुरु भएको हो त्यो अवस्थामा फर्किएपछि मात्रै वार्ताको सार्थकता हुन्छ । त्यसकारण यो व्यक्ति–व्यक्तिवीचको वार्ताको औचित्य छैन भन्ने निश्कर्ष हो ।